ခံဝန်လေး ထိုးပြီး အိမ်မှာ အေးဆေးပြန်နေမှာ မဟုတ်ကြောင်း ပြတ်ပြတ် သားသား ပြောလိုက်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ခံဝန်လေး ထိုးပြီး အိမ်မှာ အေးဆေးပြန်နေမှာ မဟုတ်ကြောင်း ပြတ်ပြတ် သားသား ပြောလိုက်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
ခံဝန်လေး ထိုးပြီး အိမ်မှာ အေးဆေးပြန်နေမှာ မဟုတ်ကြောင်း ပြတ်ပြတ် သားသား ပြောလိုက်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
အာဏာသိမ်းမှု ဖြစ်ပွားအပြီး အနုပညာရှင်တွေ များစွာဟာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ရပ်တည်ပြီး နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အမှန်တရားဘက်ကနေ ရပ်တည်ခဲ့တာကြောင့် ၅၀၅(က)နဲ့အမှုဖွင့် ခံထားရပြီး ရှောင်တိမ်းနေကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေလည်းရှိသလို ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေလည်းရှိကြပါတယ်။ ၅၀၅(က)နဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေအနေနဲ့ လက်ရှိနိုင်ငံရေးအ​ခြေအနေတွေ နဲ့ပတ်သက်ပြီး Speak outမလုပ်တော့ဘဲ ခံဝန်ကတိထိုးရင် ဖွင့်ထားတဲ့အမှုကို ပြန်လည် ရုတ်သိမ်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာ ပျံ့နှံ့လာနေခဲ့ပါတယ်။
ရဲရဲရင့်ရင့်နဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ခဲ့တဲ့သရုပ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ ၅၀၅(က)နဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရတာကြောင့် ဘေးလွတ်ရာမှာရှောင်တိမ်းနေခဲ့ပါတယ်။ ယခုမှာတော့ ပိုင်ဖြိုးသုဟာ ခံဝန်ကတိကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြတ်ပြတ်သားသားပြောဆို လာခဲ့ပါတယ်။ သူမကတော့ သစ္စာဖောက်ဆိုတဲ့ တံဆိပ် အကပ်မခံနိုင်ဘဲ အသက်ပေးသွားသူတွေ၊ထောင်ကျသွားသူတွေကြောင့် ခံဝန်ကတိထိုးမှာမဟုတ်ကြောင်း ​ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ယခုအချိန်ထိ အမှန်တရားဘက်ကနေ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်နေပြီး ခံယူချက်၊ဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားတဲ့ သူမရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ပြည်သူတွေက ချီးကျူးလေးစားနေကြပါတယ်။
သူမကတော့ ” ခံစားချက်ကိုဦးစားပေး ခဲ့မိလို့ မှားသွားပါတယ်…လို့ခံဝန်လေးထိုးပြီး အိမ်မှာအေးဆေးပြန်နေရမယ်တဲ့လား….မိသားစုနဲ့ပြန်တွေ့ရမယ်တဲ့လား…. အလုပ်တွေပြန်လုပ်ရမယ်တဲ့လား….တစ်ချို့တွေအသက်တွေပေးသွားကြပြီ… တစ်ချို့တွေ ထောင်ထဲ ရောက်ကုန်ကြပြီ….တစ်ချို့တွေအားလုံးကိုပစ်ချထားခဲ့ပြီးလက်နက်တွေကိုင်နေကြရပြီ….သူတို့တွေအိမ်ပြန်လို့မရကြတော့ဘူး…မိသားစုနဲ့လည်းကွဲကွာကုန်ကြပြီ သူတို့ချစ်တဲ့အလုပ်‌တွေလည်းလုပ်ခွင့်မရကြတော့ဘူး အဲဒီ့လူတွေကိုငါရှက်တယ် အဖြစ်မရှိသူဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်‌နဲ့တင်ငါ့အတွက်လုံလောက်ပါပြီ…သစ္စာဖောက်ဆိုတဲ့တံဆိပ်တော့အကပ်မခံပါရစေနဲ့ အရေးတော်ပုံမအောင်မချင်းငါအိမ်မပြန်ဘူး “ဆိုပြီး ရေးသားထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Source :paing phyoe thu ‘s facebook acc
အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားအၿပီး အႏုပညာရွင္ေတြ မ်ားစြာဟာ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ ရပ္တည္ၿပီး ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးမွာ တက္တက္ႂကြႂကြပါဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အမွန္တရားဘက္ကေန ရပ္တည္ခဲ့တာေၾကာင့္ ၅၀၅(က)နဲ႔အမႈဖြင့္ ခံထားရၿပီး ေရွာင္တိမ္းေနၾကတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြလည္းရွိသလို ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြလည္းရွိၾကပါတယ္။ ၅၀၅(က)နဲ႔အမႈဖြင့္ခံထားရတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြအေနနဲ႔ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအ​ေျခအေနေတြ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး Speak outမလုပ္ေတာ့ဘဲ ခံဝန္ကတိထိုးရင္ ဖြင့္ထားတဲ့အမႈကို ျပန္လည္ ႐ုတ္သိမ္းေပးမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ လူမႈကြန္ယက္ထက္မွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာေနခဲ့ပါတယ္။
ရဲရဲရင့္ရင့္နဲ႔ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးမွာ ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ခဲ့တဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္ၿဖိဳးသုကေတာ့ ၅၀၅(က)နဲ႔အမႈဖြင့္ခံထားရတာေၾကာင့္ ေဘးလြတ္ရာမွာေရွာင္တိမ္းေနခဲ့ပါတယ္။ ယခုမွာေတာ့ ပိုင္ၿဖိဳးသုဟာ ခံဝန္ကတိကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာဆို လာခဲ့ပါတယ္။ သူမကေတာ့ သစၥာေဖာက္ဆိုတဲ့ တံဆိပ္ အကပ္မခံႏိုင္ဘဲ အသက္ေပးသြားသူေတြ၊ေထာင္က်သြားသူေတြေၾကာင့္ ခံဝန္ကတိထိုးမွာမဟုတ္ေၾကာင္း ​ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္ထိ အမွန္တရားဘက္ကေန မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ေနၿပီး ခံယူခ်က္၊ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျပတ္သားတဲ့ သူမရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ကို ျပည္သူေတြက ခ်ီးက်ဴးေလးစားေနၾကပါတယ္။
သူမကေတာ့ ” ခံစားခ်က္ကိုဦးစားေပး ခဲ့မိလို႔ မွားသြားပါတယ္…လို႔ခံဝန္ေလးထိုးၿပီး အိမ္မွာေအးေဆးျပန္ေနရမယ္တဲ့လား….မိသားစုနဲ႔ျပန္ေတြ႕ရမယ္တဲ့လား…. အလုပ္ေတြျပန္လုပ္ရမယ္တဲ့လား….တစ္ခ်ိဳ႕ေတြအသက္ေတြေပးသြားၾကၿပီ… တစ္ခ်ိဳ႕ေတြ ေထာင္ထဲ ေရာက္ကုန္ၾကၿပီ….တစ္ခ်ိဳ႕ေတြအားလုံးကိုပစ္ခ်ထားခဲ့ၿပီးလက္နက္ေတြကိုင္ေနၾကရၿပီ….သူတို႔ေတြအိမ္ျပန္လို႔မရၾကေတာ့ဘူး…မိသားစုနဲ႔လည္းကြဲကြာကုန္ၾကၿပီ သူတို႔ခ်စ္တဲ့အလုပ္‌ေတြလည္းလုပ္ခြင့္မရၾကေတာ့ဘူး အဲဒီ့လူေတြကိုငါရွက္တယ္ အျဖစ္မရွိသူဆိုတဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္‌နဲ႔တင္ငါ့အတြက္လုံေလာက္ပါၿပီ…သစၥာေဖာက္ဆိုတဲ့တံဆိပ္ေတာ့အကပ္မခံပါရေစနဲ႔ အေရးေတာ္ပုံမေအာင္မခ်င္းငါအိမ္မျပန္ဘူး “ဆိုၿပီး ေရးသားထားခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
Previous post အဆိုတော် ရေမွန် သေဆုံးရခြင်း အဖြစ်အမှန်ကို ဖြေရှင်း လိုက်တဲ့ နိုဗန်ထူး
Next post အဆိုတော်ရေမွန် သေဆုံးရခြင်း နဲ့ ပက်သက်ပြီး ဝမ်းနည်း စွာရေးသား လာတဲ့…အဆိုတော် ထွန်းနောင်ဆင့် ရဲ့ စာလေးတစ်စောင်…